कर्णाली नदीमा जीप खस्यो, १५ जना बेपत्ता, उद्धारका लागि हेलिकप्टर पठाइयो, के छ ताजा अवस्था ? — Sanchar Kendra
कर्णाली नदीमा जीप खस्यो, १५ जना बेपत्ता, उद्धारका लागि हेलिकप्टर पठाइयो, के छ ताजा अवस्था ?
हुम्ला । बझाङमा १० जनाको ज्यान जानेगरी जिप दुर्घटना भएको २४ घण्टा नबित्दै कर्णालीमा पनि जीप दुर्घटनामा परेको छ। हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका हुँदै जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटका लागि छुटेको जीप मंगलबार बिहान कर्णाली नदीमा जीप खस्दा १५ जना बेपत्ता भएका छन्।
लु १ ज ७१६६ नम्बरको जीप खार्पुनाथ गाउँपालिकास्थित यांचुमा दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ। हुम्लाका प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहले कर्णाली नदीमा बेपत्ता जीपको खोजी भइरहेको जानकारी दिए।
स्थानीयका अनुसार जीपमा १५ यात्रु सवार थिए। तर जिपमा १५ जना नै थिए या कम बढी थिए भन्ने बारेमा एकिन जानकारी आइसकेको छैन । दुर्घटनास्थल सदरमुकामबाट टाढा भएकाले उद्धार र खोजीका लागि सदरमुकामबाट प्रहरी र सेनाको टोली खटाइएको छ। यस्तै वेपत्ता जीपको खोजीका लागि दुई हेलिकोप्टर समेत परिचालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
हुम्लाको खार्पूनाथ गाउँपालिकामा दुर्घटना भएको जीपमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिन्धु शाही हमालसहित उनका पारिवारिक सदस्यहरू रहेको खुलेको छ। खार्पूनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलका अनुसार उक्त जिप हुम्लाको सिमिकोटबाट गाउँपालिका कार्यालय आउने क्रममा करिब साढे १२ बजे बाटोबाट कर्णालीमा खसेर दुर्घटनामा परेको हो।
यसअघि सोमबार बझाङ सदरमुकाम चैनपुरको डुङ्ग्रीबाट मष्टा गाउँपालिकातर्फ जाँदै गरेको स १ ज १०७२ नम्बरको जीप सोमबार दिउँसो डौठीमा दुर्घटना हुँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा पाँचजना घाइते छन्।
जीपको गेयर नलाग्दा दुर्घटना भएको बताईएको छ । दुर्घटनामा परी मष्टा गाउँपालिका–१ का कलकबहादुर खड्का, उनकी श्रीमती ३८ वर्षीया जुनधारा खडका र १७ वर्षका छोरा सुनील खड्काको मृत्यु भएको छ।
चैनपुरबाट गएको प्रहरी टोलीले भीरमा गएर ५ जना घाइतेको उद्धार गरेको छ। वडा प्रहरी कार्यालय चैनपुरका प्रहरी नायव निरीक्षक महानन्द जोशीका अनुसार भीरमा अड्किएका घाइतेको तीन घण्टालगाएर उद्धार गरिएको थियो।
बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनार, प्रहरी नायवउपरीक्षक सूर्यबहादुर केसीसहितको प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो। गम्भीर घाइते तीन जनालाई भने हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज लगिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले बताएका थिए।
दुवैजनाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनालगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पहलमा गृह मन्त्रालयले हेलिकप्टर पठाएर घाइतेको उद्धार गरेको थियो।
हुम्लामा रहेको सिम्रिक ऐयरको हेलिकप्टरले दुर्घटनास्थलमै गएर दुईजना घाइतेलाई चैनपुरस्थित जिल्ला अस्पताल र तीनजना घाइतेलाई नेपालगञ्ज पुगाएको डीआईजी केसीले बताए। घाइते पाँचैजना खतरामुक्त रहेको जानकारी बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले दिए।
यता महोत्तरीको औरही नगरपालिका–१ जंघा खोलाको पुल नजिकै गएराति ट्याक्टर र मोटरसाइकल आपसमा ठोक्किँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ ।
प्रहरीका अनुसार गएराति ९ बजे औरहीबाट गौशालातर्फ जाँदै गरेको ज१त ४२७९ नम्बरको ट्याक्टर र विपरित दिशाबाट आउँदै गरेको अन टेष्ट मोटरसाइकल आपसमा ठोक्किएका थिए ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका महोत्तरीकै गौशाला नगरपालिका–३ नवराजपुरका १८ वर्षीय मनोज यादवलार्इ उपचारको लागि शुभस्वस्तिक अस्पताल बर्दिबास पुर्‍याउनासाथ चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । ट्याक्टरसहित चालकलार्इ प्रहरी चौकी औरहीले नियन्त्रणमा लिएको छ । फाइल तस्वीर: गुगलबाट